Qaraxyadii ka dhacay Hargeysa, Boosaaso,
Baledweyne & Muqdisho?
Dhinaca kale waxaa isna ka hadlay weeraradaasi Gen. Max’ud Muuse Xersi Cadde Muuse oo xilligaasi ahaa hoggaamiyihii maamul gobolleedka Puntland ee dalka Soomaaliya qaraxyadii is-miidaaminta ahaa ee lala beegsaday xaruntii ciidamada sirdoonka Puntland ku lahaayeen magaalada Boosaaso & kii isna ka dhacay Hargeysa ugu baaqay in ay wada shaqeyn ka yeeshaan sugidda ammaanka ee maamulladoodaasi, wuxuuna tacsi u diray dadkii qaraxyadaas ku geeriyooday.
3. Gen. Max’ed Nuur Max’ed Kheyre, ku xigeenkii ciidanka boliiska;
Weeraradan oo ay ku geeriyoodeen saraakiil, Waxgarad, Aqoonyahanno, Hoggaamiyeyaal dhaqameedyo, Ardey dhammeysatay waxbarashadii jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Qaraxyan oo ay sheegteen kooxda arxanlaaweyaasha ah ee uu mowqifkoodu fogaaday ee Al-Shabaab in ay iyagu mas’uul ka ahaayeen, wallow ay beeniyeen kii ugu dambeeyay, ka dib markii ay cabsi & welwel kaga timid qeybaha bulshada Soomaaliyeed.